Taariikhda Nuur Xuseen Cabdi | Somali Wiki
Home / Cayaaraha / Taariikhda Nuur Xuseen Cabdi
Posted by: Black in Cayaaraha February 15, 2017	Comments Off on Taariikhda Nuur Xuseen Cabdi 270 Views
Nuur Xuseen Cabdi, wuxuu ku dhashay xamar xaafadda Wartanabadda, sannadkii 1924kii.
Nuur wuxuu yaraantiisii jeclaa ciyaaraha, wuxuuna daawashada ciyaaraha ku soo biiray 1947kii, wuxuuna fagaaraha lagu hardamo ka muuqday muddo faro badan, wuxuuna muteystay in loo doorto madaxa Naadiga Jeenyo “LLPP”.
Sannadkii 1955kii, wuxuuna durba muujiyay karti iyo dadaal dheeraad ah, wuxuuna kor u qaaday magaca Wasaaradda Howlaha Guud, gaar ahaan Naadiga Jeenyo, wuxuuna soo saaray ciyaartoy faro badan.
Nuur wuxuu magac wayn ku yeeshay ciyaaraha dalka Soomaaliya, wuxuuna ku leeyahay taariikh lama ilaawaan ah. Sannadkii 1968kii, Nuur waxaa loo doortay in uu hoggaamiyo maamulka Xiriirka Soomaaliyeed ee Kubbadda Cagta, wuxuuna kor u qaaday dhaq-dhaqaaqa isboortiga dalka Soomaaliya, wuxuuna gacan wayn ka geystay dhismaha garoonka kubbadda cagta ee Cons Stadium iyo Garoonka 21-ka Oktoobar.
Sannadkii 1971kii wuxuu dib ugu laabtay Naadiga Jeenyo. Nuur Xuseen intuu maamulka Naadiga Jeenyo haayey wuxuu hantay guulo faro badan waxaa ka mid ahaa 4 horyaal iyo koobka koobabka ee Jeneraal Daa’uud iyo koobab aan xisaab lahayn oo u kaydsan Naadiga LL.PP.
Nuur Xuseen wuxuu dhisay wiilal kubbadda kolayga u go’doomay oo cid ka daba dhufan kartay ciyaarta kubbadda kolayga aysan jirin. Waxayna hanteen horyaallo iyo koobab fara bdan. Intii uu Naadiga madaxa u ahaa wuxuu dibadda u tagay ciyaaro rasmi ah iyo qaar saaxiibtinimo, dalalka uu tagay waxaa ka mid ahaa: Itoobiya, Yemen, Jabuuti, Masar, Keenya iyo Imaaraadka Carabta.
Nuur dadka ciyaaraha xiiseeya waxay ugu yeeraan (Father of sports) Aabaha ciyaaraha Soomaaliyeed.
Previous: Taariikhdii Abwaan Xasan Sh. Muumin (AUN)
Next: Taariikhda Maxamed Cali Xasan